BETBOO868 EROL BULUT'TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER - RESTBET501.COM GİRİŞ
BETBOO868 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
ပြိုင်ပွဲမစမီ Erol Bulut က “ငါမရှိဘူး၊ ငါတို့ရှိနေတယ်” ဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူကအဝါရောင်နှင့်အပြာရောင်အသိုင်းအဝိုင်းကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးသောစကားများလည်းပြောခဲ့သည်။ Erol Bulut “အခုအချိန်မှာပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ကခြေတစ်လှမ်းသာသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါဘီရဲ့အခြေအနေကကွဲပြားခြားနားတယ်။ ကစားသမားတွေကလည်းဒီလိုမျိုးပွဲမျိုးတွေကြောင့်လှုံ့ဆော်ခံရတယ်။ ဒါကြောင့်ရလဒ်တွေကမတူနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့အရာတွေကိုသင်ပေးတယ်။ ငါတို့လုပ်လိမ့်မည် “ ။
RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER SUPERTOTOBET0120 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER BETBOO868 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR SULTANBET516 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBOO618 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBABA138 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBOO868 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! BETBOO868 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!
10 Comments on BETBOO868 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
ZEYNEP November 29, 2020 at 1:30 pm
ASLIHAN ESRA November 30, 2020 at 12:10 am
SULTAN November 30, 2020 at 2:20 pm
AHMET December 1, 2020 at 6:00 pm
MAHMUT ARDA December 2, 2020 at 4:50 pm
ÜBEYDULLAH December 5, 2020 at 7:20 am
HÜSEYİN December 5, 2020 at 5:30 pm
EYLEM December 8, 2020 at 5:10 am
SELAMİ December 10, 2020 at 9:40 pm
SEDA December 11, 2020 at 12:40 am